सभामुखले समातेको नियम २१ को ‘ख र ग’ मा के छ ? « Nagarik Khabar
सभामुखले समातेको नियम २१ को ‘ख र ग’ मा के छ ?
प्रकाशित मिति : 8 September, 2021 4:55 pm
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संघीय सभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई एमाले विभाजनको मतियाार भनेको आरोप लगाउँदै जबाफ मागेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । विवादकाबीच प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटको लागि स्थगित भएको छ ।
एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले उठाएको प्रश्नको जबाफ दिँदै सभामुख सापकोटाले आफूले नियम अनुसार नै काम गरको र अदालमासमेत प्रवेश गरिसकेको भन्दै छलफलमा गर्न नमिल्ने बताए । त्यस क्रममा उनले संविधानको धारा १०५ र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को २१ पनि उल्लेख गरे ।
संविधानको धारा १०५
संविधानको धारा १०५ मा अदालतमा विचाराधीन कुनै पनि विषयमाथि संसदमा बहस गर्न बन्देज गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २१ को खण्ड ख, ग र घ मा सभामुखले पद आचरणको छलपल नगरेको भन्ने विषयमाथिको छलफल बाहेक सभामुखको आचराणको आलोचना गर्न नहुने, सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने र सभामुखमाथि कुनै पनि आपत्तिजनक शब्द बोल्न नहुने उल्लेख छ।